Ch 1 यूहन्ना – 2माछा
घर / बाइबल / यूहन्नाको सुसमाचार / Ch 1 यूहन्ना
1:1 सुरुमा वचन थियो, र वचन परमेश्वर थियो, र परमेश्वरको वचन थियो.
1:2 उहाँले सुरुमा परमेश्वरको थियो.
1:3 सबै कुरा उहाँलाई मार्फत थिए, र थियो कि केही उहाँलाई बिना गरिएको थियो.
1:4 जीवन उहाँमा थियो, र जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो.
1:5 र ज्योति अन्धकारमा चमकता, र अन्धकार यो पनि बुझ्न थिएन.
1:6 त्यहाँ परमेश्वरले पठाइएको मानिस थिए, जसको नाम यूहन्ना थियो.
1:7 उहाँले प्रकाश बारेमा गवाही प्रस्ताव साक्षीको रूपमा आइपुगे, सबै उहाँमार्फत विश्वास भनेर त.
1:8 उहाँले प्रकाश थिएन, तर हल्का बारेमा गवाही प्रस्ताव थियो.
1:9 साँचो लाइट, जो हरेक मानिस illuminates, यो संसारमा आउँदै थियो.
1:10 उहाँले संसारमा थियो, र संसारको उहाँमार्फत गरिएको थियो, र संसारको उहाँलाई चिन्न छैन.
1:11 उहाँले आफ्नै गए, र आफ्नै उहाँलाई स्वीकार गरेनन्.
1:12 अहिलेसम्म जसले उहाँलाई स्वीकार गरे, आफ्नो नाम मा विश्वास गर्नेहरूलाई, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका छोराहरू बन्न शक्ति दिनुभयो.
1:13 यी जन्म छन्, छैन रगतको, शरीरका इच्छा को न त, मानिसको इच्छा को न त, परमेश्वरको तर.
1:14 र शब्द शरीर भए, र उहाँले हामीलाई बीचमा बस्ने, र हामी उहाँको महिमा देखे, पिता एक मात्र प्यारो छोरा जस्तो महिमा, अनुग्रह र सत्यको पूर्ण.
1:15 जन उहाँको बारेमा गवाही प्रदान गर्दछ, र उहाँले बाहिर रुन्छिन्, यसो: "यो कसको म भने बारेमा एउटा छ: मलाई पछि आउन छ जो 'उहाँले, अगाडि मेरो राखिएको छ, किनभने उहाँले मलाई अघि अस्तित्व। ' "
1:16 र आफ्नो पूर्णतामा देखि, हामी सबै प्राप्त गरेका, पनि अनुग्रह लागि अनुग्रह.
1:17 लागि व्यवस्था मोशाले हुनत दिइएको थियो, तर अनुग्रह र सत्य येशू ख्रीष्टमार्फत आए.
1:18 कुनै एक कहिल्यै परमेश्वरको देखे; मात्र प्यारो छोरा, जो पिताको Bosom छ, उहाँले त्यसलाई वर्णन छ.
1:19 र यो यूहन्नाको गवाही छ, यहूदीहरूले उहाँलाई यरूशलेमबाट पुजारीहरू र लेवीहरूले पठाउँदा, त्यसैले तिनीहरू उहाँलाई सोध्न सक्छ, "तपाईं को हुन्?"
1:20 र त्यो स्वीकार र यसलाई अस्वीकार गरेनन्; र के उहाँले स्वीकार थियो: "म ख्रीष्टको हुँ।"
1:21 र तिनीहरूले उहाँलाई प्रश्न: "त्यसपछि के तपाईं? तपाईं एलिया हुन्?"अनि उहाँले भन्नुभयो, "म हुँ।" "तपाईं अगमवक्ता हुनुहुन्छ?"अनि उहाँले जवाफ दिनुभयो, "न"
1:22 त्यसैले, तिनीहरूले उहाँलाई भने: "तपाईं को हुन्, हामी हामीलाई पठाउनुभएको गर्नेहरूलाई जवाफ दिन सक्छ भनेर? तपाईं आफैलाई बारेमा के भन्छन्?"
1:23 उसले भन्यो, "म मरुभूमिमा बाहिर रो आवाज हुँ, 'प्रभु को सीधा बाटो बनाउन,'बस अगमवक्ताको रूपमा यशैया भन्यो। "
1:24 र पठाइएको थियो गर्नेहरूलाई केही फरिसीहरू बीचबाट थिए.
1:25 र तिनीहरूले उहाँलाई प्रश्न र तिनलाई भने, "त्यसपछि तिमी किन बप्तिस्मा गर्छन्, तपाईं ख्रीष्ट छैनन् भने, र एलिया, र अगमवक्ता?"
1:26 जन भन्दै तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: "म पानी बप्तिस्मा. तर आफ्नो बीचमा एक खडा, जसलाई तपाईं थाहा छैन.
1:27 एउटै मलाई पछि आउन छ जसले छ, जो मेरो अगाडि राखिएको छ, जसको जूता को laces म loosen गर्न योग्य छु। "
1:28 यी कुराहरू Bethania मा भयो, यर्दन मार्फत, जहाँ यूहन्ना बप्तिस्मा थियो.
1:29 अर्को दिन मा, जन येशूले तिर आउँदै देखे, र यति उहाँले भन्नुभयो: "हेर, परमेश्वरका थुमा. हेर, उहाँले जो संसारको पाप टाढा लाग्छ.
1:30 यो कसको म भने बारेमा एउटा छ, 'मलाई पछि एक मानिस आएको, जो मेरो अगाडि राखिएको छ, किनभने उहाँले मलाई अघि अस्तित्व। '
1:31 र म उसलाई थाहा थिएन. अझै यो म पानी बप्तिस्मा आउने यस कारण लागि हो: ताकि उहाँले इस्राएलका प्रकट हुन सक्छ। "
1:32 र यूहन्ना गवाही प्रस्ताव, यसो: "म को लागि एक ढुकुरले जस्तै स्वर्गबाट ​​घट्दो आत्मा देखे; र उहाँले उहाँमाथि बाँकी.
1:33 र म उसलाई थाहा थिएन. तर उहाँले मलाई पानी मलाई भन्नुभयो संग बप्तिस्मा पठाइएको: 'उहाँले कसमाथि तपाईं आत्मा घट्दो र उहाँमाथि बाँकी देख्ने, यो पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गर्ने छ। '
1:34 र म देखे, र म गवाही दिनुभयो: यो एक परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। "
1:35 अर्को दिन फेरि, जन आफ्ना चेलाहरूको दुई उभिरहेको थियो.
1:36 र येशू पैदल को पक्रने दृष्टि, उहाँले भन्नुभयो, "हेर, परमेश्वरका थुमा। "
1:37 र दुई चेलाहरू उहाँलाई सुनिरहेका थिए बोल्ने. र तिनीहरूले येशूको पछि लागे.
1:38 त्यसपछि येशूले, वरिपरि खोल्दै र उसलाई निम्न तिनीहरूलाई देखेर, तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "तपाईं के खोजिरहेका छन्?"अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने, "रब्बी (जो अनुवाद अर्थ, शिक्षक), तिमि कहाँ बस्छौ?"
1:39 उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "आऊ र हेर्न।" तिनीहरू गए र देखे त्यो बसिरहनुभएको थियो जहाँ, र तिनीहरूले उहाँलाई त्यो दिन संग बसे. अब यो दशौं घण्टा थियो.
1:40 र एन्ड्रयू, सिमोन पत्रुसका भाइ, यूहन्ना उहाँलाई सुनेका थिए र उहाँको पछि लागे थियो जो दुई को एक थियो.
1:41 पहिलो, उहाँले आफ्नो भाइ सिमोनलाई भेटे, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "हामीले मसीहलाई फेला," (जो ख्रीष्टको रूपमा अनुवाद गरिएको छ).
1:42 र येशूलाई उसलाई नेतृत्व. अनि येशूले, उसलाई gazing, भने: "तपाईं सिमोन छन्, योनाको छोरा. तपाईं Cephas भनिनेछ," (जो पत्रुस रूपमा अनुवाद गरिएको छ).
1:43 अर्को दिन मा, उहाँले गालीलमा जान चाहे, र उहाँले फिलिप फेला. अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, "मलाई पिछा गर्नुहोस्।"
1:44 अब फिलिप बेथसेदा थियो, एन्ड्रयू र पत्रुस शहर.
1:45 फिलिप नथनेल फेला, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "हामी मोशाले व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले लेखे जसलाई बारेमा एक पाएका: येशूले, यूसुफका छोरा, नासरतबाट। "
1:46 र नथनेल उहाँलाई भने, "केही राम्रो नासरतबाट हुन सक्छ?"फिलिप उहाँलाई भने, "आऊ र हेर्न।"
1:47 येशूले नथनेल उहाँप्रति आउँदै देखे, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "हेर, जसलाई एउटा इस्राएली साँच्चै कुनै छलकपट छ। "
1:48 नथनेल उहाँलाई भने, "कहाँ बाट तपाईं मलाई थाहा छैन?"येशूले जवाफ र उहाँलाई भने, "पहिले फिलिप तपाईं भनिन्छ, तपाईं नेभाराको रूखमुनि थिए जब, म तिमीलाई देखे। "
1:49 नथनेल उहाँलाई जवाफ दिए र भने: "रब्बी, तपाईं परमेश्वरको छोरा छन्. तपाईं इस्राएलका राजा हो। "
1:50 येशूले जवाफ र उहाँलाई भने: म तपाईं भन्नुभयो किनभने "म नेभाराको रूखमुनि तपाईं देखे, तपाईं विश्वास. यी महान् कुराहरू, तपाईं देख्न हुनेछ। "
1:51 अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो, "Amen, amen, म तपाईंलाई भन्न, तपाईं स्वर्गमा खुलेको देख्नेछन्, र परमेश्वरको आरोही को स्वर्गदूतहरूलाई र मानिसको पुत्र भन्दा घटते। "